Ity no loko metaly vaovao avy amin'ny Pantone | Famoronana an-tserasera
Raha misy antony hiasanao na hianaranao zavatra mifandraika amin'ny fonosana, marika ary marketing, ny loko metaly vaovao avy any Pantone dia mety raha manana andian-loko miloko tonga lafatra ho an'ireo raharaha ireo ianao.
Ny tanjon'izany loko metaly vaovao avy any Pantone dia ny hisarika ny mason'ireo mpanjifa mba handinihany bebe kokoa ny karazan-vokatra rehetra. Raha atotaly dia misy loko metaly 655 azo raisina raha mandalo amin'ny fahazoana ny boky Pantone vaovao isika.
Tsy ny marika, marketing na fonosana ihany, fa tonga lafatra izy ireo ho an'ny logo ihany koa miaraka amin'ireo feo maivana sy salantsalany ary maizina. Misy ny loko isan-karazany toy ny volamena, volafotsy, platina ary ny iray antsoina hoe "metal metal" izay mifandraika amin'ny fitaovam-piadiana.
Ny torolàlana an'i Pantone ho an'ny metaly dia misy 354 natokana ho an'ny fonosana ary 301 natokana ho an'ny varotra na ara-barotra. Izy ireo koa dia mampiditra ny loko fototry ny 25 isan-jaton'ny loko vaovao any Pantone, ny rose gold.
Pantone ho avy tsy ho ela ampio ireo mpamorona amin'izay ho vondrona faminavina efatra ny lokon'ny fironana metaly. Efa manana fanomezana miaraka amin'ny Artful Simplicity isika ary izany dia mizana amin'ny volondavenona ka hatramin'ny volamena varahina.
Ary raha manam-bola ampy ianao, dia azonao atao ny misafidy ny hividy ny boky vaovao an'i Pantone ho an'ity loko metaly vaovao ity amin'ny tranokalan'izy ireo. Ny vidiny dia somary tsy azon'ny tànana, raha ny zava-mitranga amin'ny 300 dolaraNa dia ho an'ny studio famoronana aza dia azo antoka fa ho fividianana lehibe izany noho ny harena ho azon'izy ireo eny an-tànany ary azon'izy ireo atao ny manatona aingam-panahy hatrany.
Esa aingam-panahy ho an'ny sary famantarana mpanjifa vaovao, izany bokotra CTA an'ny tranokala izany na fonosana handefasana ireo vokatra rehetra amidinay avy amin'ny ecommerce anay dia azonao avy any Pantone sy ny lokony metaly; tsy malahelo ny paleta miloko 2019.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Pantone dia mamoaka loko metaly vaovao ho an'ny fonosana, marika ary marketing